ETU ESI EHICHAPỤ OGE MMELITE WINDOWS NA PREVIEW NA WINDOWS 10 - WINDOWS 10
Etu esi ehichapụ oge mmelite Windows na preview na Windows 10
May nwere ike hụ Windows melite Download nkwukọrịta mmelite sitere na ihe nkesa Microsoft, mana n'ihi ụfọdụ ihe (nrụrụ faịlụ, ndakọrịta, ma ọ bụ chinchi amaghi ama.) Usoro nrụnye arapara ma ọ bụ wụnye ya. Ọbụna windo gwa gị na enwere ụfọdụ mmelite Windows na-echere maka nrụnye mana oge ọ bụla dara mgbe ị nwara ịwụnye ha. Ọ bụghị naanị na ndị a rue mgbe melite faịlụ gbochie ọhụrụ windo mmelite awụnyere na gị usoro ma na-a nnukwu ego nke diski ohere. Ebe ndị ọrụ na-akọ
Ọdịnaya gosi 1 Ebee ka mmelite na-echere dị? abụọ Ọ dị mma ihichapụ mmelite na-echere? 3 Hichapụ rue mgbe windo melite faịlụ
My C Drive Na-agba ọsọ na ohere na mgbe m nyochare, nnukwu dị na faịlụ nwa oge n'okpuru Jide mmelite na previu na-ewuli nke bu 6.6gb. Agbalịrị m ihichapụ faịlụ ndị na-enweghị isi site na iji nhicha disk mana ọ ka bụ otu. Kedu ka m ga-esi weghachite ebe nchekwa a?
Err njikọ timed out chrome
Ebe a post anyị na-aga site, Olee otú Hichapụ jide mmelite on Windows 10 idozi dị iche iche Windows update nwụnye metụtara njehie gụnyere Free elu Disk ohere.
Ebee ka mmelite na-echere dị?
Ihu ọma, ndị a Windows update faịlụ dị n'okpuru C: Windows SoftwareDistribution Download
Ọ dị mma ihichapụ mmelite na-echere?
Eeh, ọ bụ kpam kpam nchebe ka ihichapụ rue mgbe Windows mmelite. Ọ bụrụ na mgbe nbudata nchịkọta emelitere mmelite melite Stuck, adaghị ịwụnye ya na njehie dị iche iche anyị na-akwado otu oge na-agbazi Ndozi nsogbu ahụ, na-akpaghị aka na-edozi ma dozie nsogbu ahụ gbochie mmelite ndị a nke ọma.
Iji Gbaa Windows update troubleshooter:
esi ehichapụ egwu egwu
Meghee Ntọala , na-eji ụzọ mkpirisi keyboard Windows + I
Mmelite & nche
Pịa na Windows melite
Na Gbaa Troubleshooter.
Mgbe emechara, usoro nchọpụta nsogbu, malitegharịa Windows ma lelee maka mmelite. Lelee mmelite oge a nke arụnyere nke ọma, ọ nweghị mmelite na-echere ugbu a. Ọ bụrụ na ka nsogbu dị na mmelite na-echere maka mmelite na-ahapụ iji aka wepu ha.
Hichapụ rue mgbe windo melite faịlụ
Ihichapụ emezughị, rue mgbe Windows update faịlụ, Akpa, anyị kwesịrị ịkwụsị Windows update ọrụ na ya metụtara ọrụ mgbe ahụ si Nkesa Software folda anyị nwere ike ịchọta ebudatara windo melite faịlụ ma hichapụ ha kpamkpam. Ahapụ hụ otú e si eme
esi hazie ihe nkesa ftp
Nke mbụ, mepee windo ọrụ site na iji Ọrụ.msc site na windo nyocha.
Pịgharịa gaa na ala maka ọrụ aha ya bụ mmelite Windows,
Right pịa ya na họrọ Kwụsị
Mee otu ihe ahụ (kwụsị ọrụ) na BIT na ọrụ Superfetch.
Belata ọrụ window na ịnyagharịa na-eso ụzọ
N'ime nbudata, nchekwa Họrọ ihe niile ( Ctrl + A ) na see Hichapụ bọtịnụ.
Nke ahụ niile, ma jiri aka ịmalitegharịa ọrụ, nke ị kwụsịrị na mbụ.
Ma ọ bụ bidogharịa Windows ka ọrụ ndị a wee bido.
Ugbu a mepee mmelite Windows site na ntọala -> melite & nche -> melite windo -> Lelee mmelite. Ka anyị mara oge windo a nke ọma wụnye ọtụtụ mmelite.
Cheta na: Ọ bụrụ na ị na-achọ ikwu a akpan akpan windo update (dị ka kbxxxx wdg), Nke ahụ nwere ike iji Gosi ma ọ bụ zoo mmelite ngwá ọrụ iji gbochie windo mmelite arụnyere na sistemụ gị.
You nwere nke ọma ihichapụ rue mgbe windo mmelite? ka anyị mara na ihe ndị dị n'okpuru, gụọkwa Etu esi edozi Windows 10 nwelite nnyemaaka rapaara na 99%.
otu esi agabiga afọ youtube
chọọ anaghị arụ ọrụ na ele 2016
unmountable buutu olu windo 7
enweghị ike ịwụnye windo 10 1903
Njikọ mpaghara adịghị enwe nhazi IP dị mma